Messi iyo Ronaldo oo sii wada ineey taariikh cusub udhigaan kubada cagta
Kooxda Barcelona ayaa xalay guul weyn ka gaartay kooxda ay sida aadka uweyn uxifaaltamaan ee Realmadrid iyadoo kaga adkaatay 3/2,kulankan ayaa ahaa is araga lugta kowaad ee Super Cup-ka, waxayna kadhacday garoonka kooxda Barcelona Camp New.
Ciyaartii xalay dhexmartay labadan koox ee yurub ugu quwada weyn ayaa waxaa laga soo calaamadeeyay dhowr rikoor kuwaasoo kala ahaa:
1-Waxay ahayd markii ugu horeesay ee naadiga Realmadrid ay halmar garoonka soogaliso 6 kamid ah ciyaaryahanada Xulka Spain ciyaar katirsan El Classico.
2-74 kamid ah ciyaaraha El Classico oo ay isaga hor imaadeen labadan koox islamarkaasna lagu ciyaaray garoonka Barcelona Ee Camp New madhicin in ay barbaro ku dhamaato qeybta koowaad ee ciyaarta, xalayna waxay ahad markii ugu horeesay ay barbaro 1/1 ah ku kala maraan labadan naadi.
3-C.ronaldo waa ciyaaryahankii ugu horeeyay taariikhda ee 4 ciyaarood oo isku xiga gool taabsiiya shabaqa Barcelona inta laxasuusto taariikhda.
4-Inta laxasuusto taariikhda labadan koox ayaa mudo hal daqiiqo gudahooda ah waxay iska dhaliyeen miin gool,ciyaartii xalay ayaa waxaa goolka ku hormaray naadiga Real oo uu usaxiixay xidigooda C.ronaldo Balse daqiiqad kadib waxaa ujawaabay Pedro,sidaas si lamid ah sanadii 2001 ayaa Ciyaaryahan Rivaldo oo u ciyaari jiray Barcelona waxa uu gool kadhaliyay Real daqiiqada markeey ahayd 35 daqiiqad kadib waxaa gool isna kadhaliyay Raul daqiiqadii 36-aad.
5-C.ronaldo waa ciyaaryahankii 5aad ee isagoo Real katirsan 4 ciyaar oo isku xigta Gool kadhaliya Barcelona.
6-Messi wiilka mucjisada ayaa isna xalay goolkiisa 14-aad taabsiiyay shabaqada Raelmadrid.
7-Ciyaartii xalay ayaa noqoneysa in markii labaad ay laba ciyaaryahan oo kasoo wada jeeda wadanka Arjentina isugu jawaabaan goolal,kuwaasoo kala ah (Messi iyo Dimaria) sidookale waxaa sidaan oo kale isugu jawaabay sanadii 2009-ka (Messi iyo Higuain).